Iran: Be Hetsika Fanoherana, Fahafatesana Iray Indray (Lahatsary) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Febroary 2011 18:27 GMT
Na dia teo aza ny fisian'ireo mpitandro filaminana tamin'ireo sampanana be mpifamoivoy indrindra, ireo vavolombelona dia milaza fa nifamory ihany ireo mpanao fihetsiketsehana nanomboka ny tolakandro ary nitohy nihanatevina izany ny Alahady 20 Febroary tao in Tehran, Isfahan, Shiraz, Marivan ary tanàna lehibe hafa koa. Nitatitra ireo tranonkalan'ny mpanohitra fa nitifitra an'ireo mpanao fihetsiketsehana ny mpitandro filaminana tao an-kianjan'i Hafteh Tir ao Tehran, nahafatesana olona iray. Safari-Ali Baratloo, tomponandraikitra iray amin'ny filaminana, dia niampanga ireo tranonkala ho nitatitra lainga ary nandà ny fisiana fifandonana na fahafatesana, hoy ny nolazain'ilay masoivoho Fars misy fandraisana anjaran'ny ofisialy amin'ny ampahany.
Afisy lehibe iray miantso famoriam-bahoaka ao Iran ny 20 Febroary.
Minitra vitsy talohan'ny nirotsahana tamin'ilay fihetsiketsehana dia nanoratra [Fa] i Divanesara, [fa]:
Nitombo nandritra ny taona maro izahay niaraka tamin'ity teny faneva ity manao hoe “Handresy sabatra ny rà” tany am-pianarana. Ankehitriny fotoana ho anay izao mba handalovana sedra… Misy fisavoritahana ihany eo amin'ireo olona marobe, tsy fantatr'izy ireo ny teboka fiaingan'ilay hetsika… Hisy vahoaka betsaka kokoa noho ny 14 Febroary eny an-dalambe.
Sabz21 manoratra hoe [fa] nivadika ho toby miaramila i Tehran ary feno mpitandro filaminana eny rehetra eny.
Persiaroyal manoratra [fa] fa ireo mpitarika ny Antoko Maitso dia tokony hamadika ny andro tsirairay ho toy ny alina mikitroka ho an'ny mpitondra amin'ny alalan'ny fantsoana ny olona hanao fihetsiketsehana.
Etehadesabz manoratra [fa] fa ny zava-miafin'ny fandresena, toy ny efa nanaporofoan'i Ejipta sy Tonizia azy, dia ny fidinan'ny olona ho eny an-dalambe.
Indreto lahatsary maneho androm-panoherana iray hafa tao Teheran sy tany an-kafa.
Ireo mpanao fihetsiketsehana tao Teheran mihiaka ny hoe “Aorian'i Ben Ali sy Mubarak dia anjaran'i Seyed Ali indray”, entiny milaza ny mpitarika an'i Iran, Seyed Ali Khamenei sy ny filoha vao Toniziana vao avy niongana, Zine El Abidine Ben Ali.
Ary eto, “MAtesa ny mpanao jadona!” tao Shiraz: